Wargeyska “AS” oo shaaca ka qaaday maalinta ay kooxda Real Madrid ku soo bandhigi doonto Hazard garoonka Santiago Bernabéu – Gool FM
Wargeyska “AS” oo shaaca ka qaaday maalinta ay kooxda Real Madrid ku soo bandhigi doonto Hazard garoonka Santiago Bernabéu
(Madrid) 29 Maajo 2019. Laacibka reer Belgian iyo kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa ku sii dhawaanaya xirashada maaliyada cadaanka ah ee Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga, iyadoo la sii sheegayo xiliga lagu soo bndhigi doono garoonka Santiago Bernabéu isagoo xiran maaliyada cadaanka ah.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Real Madrid ay ugu soo bandhigi doonto jamaahiirteeda laacibka reer Belgian ee Eden Hazard 3-da June ee ku beegan maalinta Isniinta soo aadan garoonka Santiago Bernabéu, hadii ay wax walba u dhacaan sida loo qorsheeyay.
Wargeyska ayaa sheegay in fikirka madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu yahay ugu horeyn dhameystirka heshiiskii Eden Hazard oo bar-tilmaameedka koowaad u ah, kaddib wuxuu doonayaa inuu wada hadal toos ah la galo kooxda Frankfurt si uu u dhameystiro heshiiska Luka Jović.
Eden Hazard ayaa la filayaa inuu maanta oo Arbaco ah ciyaari doono kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxda Chelsea finalka UEFA Europa League ay kula ciyaari doonaan Arsenal magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan, taasina waa sababta aan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin ku biiristiisa kooxda Real Madrid.
Wargeysyo badan ayaa xaqiijinaya in Real Madrid uu hogaaminayo madaxweynaha kooxda Florentino Perez ay bixin doonaan qiyaastii aduun dhan 115 milyan oo euros si loo kansalo heshiiska Hazard ee Chelsea, iyadoo 15 milyan uu ku qaadan doono hadii uu kooxda kula guuleysto koobab iyo hadii uu u dhaliyo goolal.
Heshiiska uu Hazard ku joogo kooxda Chelsea ayaa wuxuu soo idlaanayaa xili ciyaareedka soo socda, iyadoo uu laacibka reer Belgian uu iska diiday inuu qalinka ku duugo heshiis cusub uu ku sii joogi karo garoonka Stamford Bridge.